Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ejiptiana Neny mivoaka avy vatam-paty ho an'ny fotoana voalohany amin'ny 2,300 taona” nosoratan'i Alan Yuhas in New York, fa theguardian.com ny zoma faha-12 desambra 2014 05.00 UTC
A Neny nivoaka avy ny vatam-paty voalohany amin'ny 2,300 taona maro tamin'ity herinandro ity taorian'ny fotoana henjana toy ny mpahay siansa nanainga ny hazo sarony.
ny tena, tsara nisintona avy ny fahiny efajoro amin'ny conservator JP Brown sy telo hafa mpahay siansa tao amin'ny Chicago Field Museum, anisan'ny iray 14 taona antsoina hoe Ejiptiana zazalahy Minirdis. Brown sy ny mpiara-miasa aminy dia miasa amin'ny Neny sy ny vatam-paty mba hanamboarana fahavoazana sy Mampitombina azy ho fanehoana sy mandeha any amin'ny iray manaraka fampirantiana.
"Tena Tena natahotra fanaovana,"Brown nilaza tamin'ny Guardian, mitadidy ny fomba nampiasa ny ekipany ny vy be pitsiny fandrian-jaza mba hanandratra ny sarony toy ny miray. "Ary ny anankiray mahatonga natahotra kokoa, raha misy olona niara-niasa tamin'ny olona sisa tavela,"Hoy izy, "Ary rehefa mahazo tanora dia mahazo bebe kokoa mahakasika. Ianao dia mahatsapa izany fiainan'ny olona iray izay tapaka fohy. "
JP Brown sy ny ekipany sary tany ankoatry ny lo tenan'ny Minirdis, ny 14 taona zazalahy Ejiptiana izay zanaky ny mpisorona. Sary: Charles Rex Arbogast / AP
Misy soratra eo amin'ny vatam-paty atao hoe Minirdis tahaka ny zanaky ny mpisorona tao Min, ny foibe andriamanitra ejipsianina fahavokarana. Minirdis 'vatana hita tao an-faramparan'ny taonjato faha-19 ao amin'ny toerana fandevenana lehibe manamorona ny Neily akaikin'ny tanànan'i Akhmin, izay maro ny mummies amin'ny fampisehoana any Etazonia avy.
Nanana dia velona, Minirdis Azo inoana fa efa mpisorona, Brown hoe:.
Mummification raha bangoina ho "ny 10 percenters "fahiny Ejipta, Brown hoe:, toy ny mpisorona, ny fianakaviany, ny fianakavian'ny mpanjaka sy ny royals 'akaiky indrindra fonksionera. Minirdis 'vatam-paty tonga tany amin'ny saha Museum ao amin'ny taona 1920.
Nahita X-tara-kely vatana amin'ny oversized vatam-paty, mpikaroka tamin'ny voalohany nihevitra ny vatana an'ny vehivavy. Ary CT notarafina nanambara "ny teny filahiana", Brown hoe:, izay nifarana ny henatra momba ny lehilahy anarana amin'ny vata-patin'i. Na ny mpahay siansa tsy mahay Minirdis maty, hita ny vatam-paty no natao ho an'ny olon-dehibe sy repurposed rehefa maty ny zaza.
Ny Ejiptiana Goddess-bazana, izay midika hoe lanitra, indray no hita ao amin'ny ambany ny vatam-paty ny Minirdis. Sary: Charles Rex Arbogast / AP
Rehefa manala ny sarony, ny ekipa natahotra ny vatam-paty rehetra ho lavo masina; ankehitriny, Brown sy ny mpiara-miasa aminy miatrika ny fanamby na ny hiarovana ny tena sy ny vatam-paty. Ny alalan 'izy ireo no hitady ny potipoti-javatra rehetra ao amin'ny vatam-paty - ny sasany hazo, sasany paty, misy olombelona - dia hanomboka ny asa marefo ny fanaovana izany rehetra izany miaraka. "Raha nandray piozila sy nampifanintontsintona azy ka notriariny izany ary avy eo dia nandao azy ho 2,300 taona, izany ankapobeny ny zavatra isika dia manao eto,"Brown hoe:.
Ny conservators Hiezaka ny hampiasa ho betsaka ny zavatra tany am-boalohany araka izay azo atao, Ary hoy Brown misy fitaovana maoderina izy ireo mampiasa dia ho tsy mateza, fa "tsara fanahy" amin'ny fomba Ejipsianina fahiny. Ho rewrap ny sisa tavela ao amin'ny fomba fahiny Egyptiana sy hamerina sombintsombiny ny faty.
Ny Neny ny rakotra sy ny gilded saron-tava no simba nandritra ny fandevenana sy nandritra ny taona maro, ary handrafitra iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. "Zavatra tsirairay amim-pahombiazana dia tsy manam-paharoa,"Brown hoe:, amin'ny "isan-karazany samy hafa fomba amam-panao ny asa tanana izay nivoatra ny an'arivony taona".
Noho mummies vitsy manerana izao tontolo izao, manam-pahaizana manokana amin'ny traikefa hiarovana ny marefo sisa tavela dia saro-tadiavina aza sy conservators 'ny asa fikarohana blends, fiarovana sy ny arkeolojia. Ny Saha Museum nitondra Mimi Leveque avy any amin'ny Peabody Essex Museum mba hanampy Brown, izay nilaza izany tamin'ny vatam-paty faharoa fa ny voalohany Neny.
ny fampirantiana, "Mummies: Images any ankoatra ", dia haneho mihoatra noho 20 mummies sy ny am-polony ny asa tanana, ary tokony handeha ho any amin'ny Natural History Museum ao Los Angeles sy Denver Museum ny Natiora sy ny Siansa Eto amin'ireto taona.